Wararkii ugu dambeeyay ee cudurka Coronavirus - BBC News Somali
Ra'iisalwasaaraha dalka Talyaaniga, Giuseppe Conte, ayaa sheegay in la xirayo dhammaan goobaha ganacsiga ee aan muhiimka ahayn oo ay warshaduhu ku jiraan, xilli waddankaasi uu la daalaa dhacayo xakamaynta faafitaanka cudurka safmarka ahi ee Coronavirus.
Balse Ra'iisalwasaare Conte waxa uu shacabka u xaqiijiyay in dukaamada, farmashiyeyaasha, baananka iyo adeegga boostada ay sii shaqeyn doonaan oo aan la xiri doonin.
Hawl-wadeenno caafimaad oo u dhashay dalka Cuba oo ka kooban dhakhaatiir iyo kalkaaliyeyaal caafimaad ayaa ku sii wajahan gobolka Lombardiya ee woqooyiga dalka Talyaaniga, si ay gacan u siiyaan khakhaatiirta la tacaalaya cudurka Coronavirus.
Hawl-wadeennadani caafimaad oo gaaraya ilaa 50 ayaa ah kuwa inta badan la hawlgeliyo xilliyada ay dhibaatooyinka ba'ani jiraan.
Dowladda ku meel-gaarka ahi ee dalka Bolivia ayaa dib u dhigtay doorashada madaxtinnimada ee dalkaasi, maadaama dalkani oo dhan laga billaabo maanta la gelinayo karantiil.
Mas'uuliyiinta guddiga doorashooyinka dalkaasi ayaa sheegaya in la hakinayo doorashadaasi muddo laba usbuuc ah, maadaama shacabka dalkaasi la gelin doono karantiil buuxa, balse ilaa haatan ma aysan sheegin xilliga ay dhici doonto doorashadaasi dib loo dhigay.
Qaaradda Afrikana, dalka Uganda ayaa xaqiijiyay qofkii ugu horreeyay ee uu cudurka Coronavirus ku soo ritay gudaha dalkaasi. Xukuumadda Kampala ayaa joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ahi ee dalakasi uga imaanaya dibadda iyo sidoo kale dadka ka soo gudbaya xudduuda dhanka dhulka.
Mar sii horreysayna, waddamada Eritrea iyo Angola ayaa xaqiijiyay in cudurkaasi laga helay waddamadooda.
Dalka Shiinaha, 46 qof oo hor leh ayaa laga helay cudurka Coronavirus balse dadkani ayaa marka laga reebo hal qof waxay xanuunkani kala yimaadeen dibadda, waana muwaadiniin u dhashay dalkaasi oo dibadda ka soo laabtay.
Xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa shaacisay in 98 qof oo hor leh uu cudurkaasi ku soo ritay gudaha dalkaasi. Tiradani ayaa muujinaysa sida faafitaanka cudurkaasi uu ugu sii yaraanayo gudaha dalkaasi, waxaana guud ahaan tirada dadka dalkaasi ee uu cudurkaasi haleelay ay haatan gaartay 8,897 qof.
Dalka Australia ayaa noqday dalkii ugu dambeeyay ee ku dhawaaqo qorshe lagu barataarayo dhaqaalaha dalkaasi, si loo yareeyo saameynta dhaqaale ee cudurka coronavirus.
Ra'iisalwasaaraha dalkaasi, Scott Morrison, ayaa sheegay in dowladda dalkaasi ay diyaarinayso 110 bilyan oo doolar oo lagu kabayo dhaqaalaha dadka iyo shirkadaha uu dhaqaale ahaan saameeyay cudurkani.